Daawo Sawiradda: Nabad Sugida oo soo bandhigtay shabaab dil geystay. – idalenews.com
Daawo Sawiradda: Nabad Sugida oo soo bandhigtay shabaab dil geystay.
Hay’ada Nabad Sugida Qaranka, ayaa maanta magaalada Muqdisho kusoo bandhigtay 2 wiil oo dhalinyaro ah iyo Haweeney weyn, waxaana lagu eedeeyay ineey masuul ka ahaayeen dil maalmo kahor Muqdisho loogu geystay Nafiso Cismaan Salaad, oo ahayd gabar dhawaan ka qalin jabisay Jaamacada Soomaliya qeybteeda Kal kaalisonimada.
Hay’ada Nabad Sugida, ayaa sheegtay in 2da wiil ee dhalinyarada ah ay qirteen, ineey qeyb ka ahaayeen ragii sida foosha xun u dilay Nafiso.
Xasan Maxamad Cabdi oo Shabaab dhexdiisa looga yaqaano Salmaan waxa uu qirtay inuu ka qayb ka ahaa Dilka Nafiso. wuxuuna sheegtay inuu Xabadda 2-aad ee lagu dilay Nafiso uu isagu kaga dhuftay qoorta, halka Xabadda 1-aadna uu sheegay inuu ku dhuftay saaxiibkiis Shaafici Cabdi Xirsi oo isticmaalayay Bastoolad Nooca Teeteeda loo yaqaan. Wuxuuna Xasan isagoo sii hadlaya intaa raaciyay in 2-da Xabbo oo kalana ay ku dhufteen saaxiibadiis kale oo aan Madasha la keenin.
Sidoo kale Hay’ada Nabad Sugida, waxay sheegtay in ragaan ay qirteen, inay gaysteen Dil dhawaan isna loogu gaystay Xaafadda Suuqa Xoolaha Askari lagu magacaabo Khaliil oo ka tirsan Hay’adda Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed.
Deeqo Diraac, oo ah haweeneyda lala soo qabtay Ragaan, ayaa la sheegay ineey saldhig u ahayd shabaabka dilalka ka geysta degmooyinka Yaaqshiid iyo Heliwaa.
Allaha u Naxariistee Marxuumad Nafiso waxay noqotay Muwaadinadii ugu dambaysay ee ay si xaq darro ah ku dilaan Maleeshiyadan Al-Shabaab ka tirsan ee inta ay qirteen dilay in ka badan 20 qof oo siyaabo kala duwan loogu dilay Degmooyinka Heliwaa iyo Yaaqshiid. waxayna ahayd Nafiso gabar dhalinyaro ah oo baratay Caafimaadka, isla markaana ay ka go’nayd inay bulshadda u adeegto. Laakiin arxan laawayaal ayaa hor istaagay aqoonteeda inay uga faa’iidayso Bulshada.
Dhageyso: A/raxmaan C/shakuur oo ka qeyb ahaa heshiiskii Addis Ababa oo maamulka kmg ee Jubba ku eedeeyey dhaqan gelinta heshiiska Addis Ababa
Daawo Sawiradda : NBB waxa uu Shacabka Baydhabo Janaay u dhisay Dugsigii 8-aad ee lagu Barto Qur’aanka kariimka.